असारमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज नबढाउने - Janasamsad
असारमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज नबढाउने
२९ जेष्ठ २०७९, आईतवार १४:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । असारमा पनि बैंकहरुले निक्षेमा हाल दिँदै आएको ब्याजदरलाई नै यथावत राख्ने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले असार महिनाका लागि पुरानै ब्याजदरलाई यथावत दिइने जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएको र मौद्रिक नीति पनि प्रतिक्षामा रहेकाले असार महिनामा पुरानै ब्याजदरलाई यथावत राख्ने निर्णय नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले गरेको हो । जेठ मसान्तसम्म बैंकहरुले असार महिनाका लागि पुरानै ब्याजदरको सूचना सार्वजनिक गर्नेछन् ।
हाल वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.०३, संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा १०.०३ र रेमिट्यान्सको मुद्दती निक्षेपमा १२.०३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिँदै आएका छन् । त्यस्तै बचतमा ७.०३ र केहीले विशेष योजनामार्फत ८.०३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका छन् । हरेक महिना बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदरमाथि पुनरावलाेकन गर्ने गरेका छन् । अघिल्लाे महिनाको तुलनामा यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था हेरेर मात्रै ब्याजदरबारे निर्णय हुन सक्ने बैंकर बताउँछन् । राष्ट्र बैंक हाल मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । बैंकमा बढ्दो लगानीयोग्य रकमको अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उच्च व्यापार घाटा, बढ्दो महँगी लगायतलाई यसपटकको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
इम्बोस्ड नम्बर देवनागरीमा लेख्न मिल्दैन ?
चारआली जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा महिलाको शव फेला
नेपालमा पेट्रोलको मूल्य दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो
७ असार २०७९, मंगलवार १०:४०
प्रदेश १ : कुन सवारी साधनमा कति कर वृद्धि ?
५ असार २०७९, आईतवार २०:२४
एन्फा चुनाव : नेम्वाङ प्यानललाई गणेश थापाको साथ !
२ असार २०७९, बिहीबार १०:२५
चिनी प्रतिकिलो एक सय पाँच रूपैयाँ पुग्यो
२९ जेष्ठ २०७९, आईतवार २२:२४